Alaabta guryaha, hubinta tayada
Sariirta sariirta, fadhiga, dib-u-fadhiisiyayaal, fadhiga qaybta, furaash iyo gogosha sariirta oo Casri ah, Yurub, Qaabka Chesterfield
In ka badan 35 sano oo khibrad leh ODM & OEM
Baotian Furniture Co., Ltd. waxaa lagu aasaasay 1985 kuna yaal Shunde, Magaalada Foshan, Gobolka Guangdong. Waxaan daboolaynaa aag ka mid ah 50,000 mitir laba jibbaaran iyo caasimada diiwaangashan oo ku saabsan 2 milyan oo doolar.
Soo saaraha sariiraha Baotian fadhiga ayaa ku takhasusay soo saarida fadhiga, sariirta sariirta, koronto koronto, furaashka iyo gogosha sariirta. Waxaan iskaashi la leenahay mashruuca hoteelka, jumlo, iyo dukaamada.
U qaabeynta gadaal iyadoo leh xumbada cufnaanta sare taasoo kaa dhigeysa inaad dareento jilicsanaan iyo sidoo kale taageerid. Dharka maro jilicsan ee mugdiga ah way fududahay in la nadiifiyo. Naqshadeynta gacan ku haynta gacan qabashada waa inay la jaan qaaddo miisas kala duwan oo dherer ah. Saldhigga kursiga adag ee alwaaxa oo nolosha adeegga ka dhigaya mid dheer oo isku dhafan.
Qaabka Ingiriisiga ah ee L qaabkiisu yahay sariirta dharka lagu qurxiyo fadhiga qaybta boqornimada. Cinabka guduud, jaceyl iyo xarrago leh, kulan kaamil ah oo laga helo dhadhaminta cawska khamriga canabka. Meelaha la isku hagaajiyo ee la hagaajin karo ayaa u hoggaansamaya baahidaada, ka saar ama hayso markasta oo aad u baahato. Qalabka biraha ahama iyo guga jeebka jeexjeexa ee kursiga barkinta waxay keensadaan nabadgelyo iyo dareen fadhiga oo wadajira.
Fadhiga Chesterfield oo leh chaise ayaa ka fudud oo ka jilicsan kuwa kale, kaas oo qaadanaya fadhiga caadiga ah ee Chesterfield. Waxaan qaadanay naqshad duug ah laakiin waxaan siinay dareen casri ah. Iyada oo ku saleysan nooca tufting ee Chesterfield, waxaan isku dayeynaa inaan bedelno qaabkeeda culus ee soo jireenka ah.
Fadhiga saalada casriga ee chaise oo leh midab casaan qaali ah - caajis caajis ah hadana si qurux badan soo jiidasho leh. Cagaha adag ee alwaaxa waxay si weyn u soo bandhigaan taageero xoog leh. Dareen raaxo leh ayaa ka hela jidka fadhiga noocan oo kale ah iyada oo la adeegsanayo guga jeebka ku jira & isbuunyo cufan leh.
Sariirta madow ee maqaarka lagu keydiyo ayaa ku wanaagsan in loo doorto qol jiif yar maxaa yeelay had iyo jeer wey weyneysaa muuqaal ahaan waxayna ku darsataa iftiin dareen leh. Midkani madow wuxuu isku daraa soojiidasho leh qaab iyo boodh madax adag oo xijaaban iyo sidoo kale guud ahaan qariya sanduuqyada wax lagu keydiyo.
Naqshadeynta Chesterfield Design Black Fabric Corner Couch, Casri ah, Nadiifi, iyo Fashion. Hal shey oo weyn oo kursiga gariiradda kursiga gariiradda ayaa si raaxo leh oo jilicsan. Naqshad dhaqaaqa waa fududahay in la nadiifiyo oo la nadiifiyo. Badhamada biraha dahabiga ah iyo lugaha birta biraha ka samaysan waxay ka dhigayaan naqshadda fadhiga mid qurux badan.
3 kursiga sariirta fadhiga dharka, oo leh Meel-meeris meeris Beljam Brand Frame. Wareeg adag oo bir ah, furaash guga jeebkiisa: 143*195*12cm. Hal talaabo oo furitaanka sariirta sariirta ayaa ka sahlan oo si fudud loo maareeyo.
Alaabada hudheelka ah qaabka casriga ah isticmaalka guud ee barkinta kursiga beddelka sariirta sariirta 500 Sumadda Mareykanka. Nidaamka taxanaha dhuumaha laba jibbaaran wuxuu bixiyaa taageero xoogan si loo daboolo baahiyaha hoteelada iyo qoysaska kala duwan. Cabirka joodariga gu'ga ee jaangooyada caadiga ah: 90/130*185*12cm.
Fadhiga casriga ee geeska casriga ah ayaa sii kordhaya caanna u ah cabirkooda la hagaajin karo iyo geesaha raaxada leh ee ay ku dhegan yihiin. Haddii aad raadineyso wax ku dhaca isku dheelitirnaan sax ah oo udhaxeysa jaranjarada iyo fadhiga geeska, tixgeli alaabtayada Baotian. Fadhiga saafiga ah ee waasac wuxuu leeyahay meel ku filan qoyska oo dhan isagoon aad u badneyn. Dahaarka dharka Gray wuxuu ku darayaa taabasho dheeri ah raaxada naqshadeynta. Waxaa jira kuwa kale oo badan oo la heli karo sida jilif haddii aad neceb tahay dharka sidaa darteed dukaan ku dhow..